Sakafo mahazatra any Espaina: manomboka amin'ny omelette ovy ka hatramin'ny mofomamy Santiago | News Travel
Louis Martinez | | España, gastronomy
ny Sakafo mahazatra any Espaina malaza eran-tany izy ireo. Ankoatr'izay dia holazainay aminao fa misy fiheverana iraisam-pirenena ny gastronomie eto amintsika. Raha ny marina, araka ny fantatrao, maro amin'ireo mpahandro espaniola no mankafy laza izay tsy tokony hitsiriritana amin'ny an'ny Frantsay. De maninona Frantsa no fototry ny sakafo haute.
Na izany aza, ny sakafo Espaniola mahazatra dia manana ny fakany ao amin'ny fomban-drazana ary ny ankamaroany dia noho ny filan'ny sakafo. Nila nihinana sakafo mahavelona ny razambentsika mba hahazo hery indray rehefa avy niasa mafy tany an-tsaha. Vokatr'izany dia nipoitra ny gastronomy izay kaloria toy ny tsirony, izay nanjary marika tena izy ny lovia izay mandrafitra ny sakafo mahazatra ao Espaina. Hasehonay anao ny sasany amin'izy ireo.
1 Ny omelette ovy, tandindon'ny sakafo mahazatra any Espaina
2 Ny paella
3 Voanjo asurianina
4 Gazpacho, marika iray hafa amin'ny sakafo Espaniola mahazatra
6 Lasopy Madrid
7 Ny mofomamy Santiago
Ny omelette ovy, tandindon'ny sakafo mahazatra any Espaina
Ny omelette ovy
Angamba, ity sakafo ity, na dia tsotra aza, no malaza indrindra eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena amin'ny sakafo mahavelona antsika. Tsy mazava anefa ny niaviany. Misaotra ny Tantaran'ny Inde, fantatsika fa na ny mpandresy na ny tompon-tany dia efa lanin'ny omeleta atody.
Ho an'ny ampahany, ny ovy dia tuber avy any Amerika Atsimo izay fantatry ny Hispanika noho ny Incas. Fa ny filazana mazava voalohany an'io sakafo io dia nanomboka tamin'ny 1817. Taratasy miantefa any amin'ny Cortes de Navarra izay voalaza fa mihinana azy ny tantsaha. Etsy ankilany, misy angano milaza fa ny omelette ovy dia noforonin'ny jeneraly Carlist Zumalacarregui mba hanome fahafaham-po ny hanoanana ny miaramilany, izay nanao fahirano an’i Bilbao.
Na izany aza, ity karazana tortilla ity dia voaomana manerana an'i Espaina ary matsiro ho an'ny teratany sy ny vahiny. Araka ny anarany dia misy atody, ovy ary, fanampiny, tongolo. Toy izany koa, misy variana hafa avy aminy, toy ny Tortilla Paisana, izay ahitana chorizo, dipoavatra mena ary peas.
lovia misy paella
Azo antoka fa ity lovia ity no malaza indrindra, toy ny sakafo mahazatra any Espaina, any ivelany. Raha ny marina dia heverina izany iraisam-pirenena indrindra ny sakafontsika. Izy io dia teratany ao amin'ny faritr'i Levantine, tany misy vary be dia be. Ny niandohan'ity fomba ity dia mbola tranainy kokoa noho ny an'ny omelette ovy, satria heverina fa mifandray amin'ny fahatongavan'ny vary any amin'ny Saikinosy Iberiana tamin'ny taonjato faha-XNUMX niaraka tamin'ny Arabo izy ireo.
Na ahoana na ahoana, ny fahalalana momba ny paella dia efa voarakitra be dia be tamin'ny taonjato faha-XNUMX, na dia nantsoina aza izy io Vary Valenciana. Efa nalaza mihitsy aza izy io, satria tamin'izany fotoana izany dia naverina tany amin'ny faritra hafa misy variana. Io no iray amin'ireo lovia izay misy fanamboarana bebe kokoa. Tsy mila manonona anao izahay hazan-dranomasina, akoho na hena paella, mba hanome ohatra telo fotsiny.
Na izany aza, tokony ho fantatrao fa ny paella Valencian, izay ny tany am-boalohany, dia tsy misy amin'ireo vokatra ireo. Ny fomba fahandro azy dia tsotra kokoa ary misy akora anana betsaka kokoa. Amin'ny fitambarany, fototra sivy no nanaovana azy: vary, bitro, akoho, tsaramaso maitso, voatabia, menaka oliva, safrona, sira ary rano. Na izany aza, ny hafa toy ny tongolo lay, paprika, artichoke, rosemary ary na sifotra dia azo atao ihany koa.
Asturian bean stew, iray amin'ireo sakafo mahazatra any Espaina
Fantatra maneran-tany ihany koa ity sakafo tavaratra ity. Araka ny voalazanay teo aloha, ny fomba fahandro dia noho ny marina ny filàna kaloria ny Asturians fahiny, zatra ny mari-pana ambany sy ny asa fambolena mafy.
Na dia eo aza ny fihinanana tsaramaso malalaka ("faba") tany Asturias dia tamin’ny taonjato faha-XNUMX no teraka ny fabada, araka ny voalazan’ny manam-pahaizana sasany, tamin’ny taonjato faha-XNUMX, na dia tsy misy porofo momba ny fanadihadiana aza. Hita ao amin'ny gazety Gijón ny filazana an-tsoratra voalohany Ny Varotra tamin’ny 1884. Noho izany antony izany, ny gastronome hafa dia mihevitra fa teraka tamin’ny faran’ny taonjato faha-XNUMX ilay lovia.
Na izany na tsy izany, io no fomba fanamboarana matanjaka indrindra hitanay hatreto. Satria tsy misy tsaramaso malalaka, paprika, tongolo gasy, tongolo sy rano, fa koa ny malaza compago. Ity, izay masaka miaraka amin'ny tsaramaso ihany, dia vita amin'ny chorizo ​​​​, pudding mainty, soroka kisoa ary bacon betsaka.
Amin'ny maha te hahafanta-javatra, dia hilaza isika fa ny fahendrena malaza milaza fa ny tsaramaso lasopy tsara kokoa ny andro manaraka. Midika izany fa raha avela hiala sasatra mandritra ny efatra amby roapolo ora, dia vao mainka matsiro ny lovia. Ary nahazo laza iraisam-pirenena ihany koa ity fomba fanamboarana ity ary naverina naverina tamin'ny ankamaroan'ny tany. Misy mitovitovy amin’izany, ohatra, any Meksika adala ary any Brezila ny feijoada.
Gazpacho, marika iray hafa amin'ny sakafo Espaniola mahazatra
Gazpacho, marika iray hafa amin'ireo sakafo mahazatra any Espaina
Izy io dia iray amin'ireo sakafo iraisam-pirenena amin'ny sakafo espaniola. Raha ny momba anao dia avy amin'ny Andalusia, izay angamba no nahatongavany niaraka tamin'ny silamo. Raha ny fantatra mantsy dia efa lany tamin’izany Al Andalus tamin’ny taonjato fahavalo. Na izany aza, ny fomba fanamboarana dia tsy mitovy amin'ny ankehitriny. Ataovy ao an-tsaina fa iray amin'ireo singa fototra amin'izao fotoana izao ny voatabia. Ary avy any Amerika izany taorian'ny fandresena.
Miaraka amin'io, poivre, tongolo gasy, mofo, menaka oliva, vinaingitra, sira ary rano no mahaforona ity lasopy mangatsiaka mangatsiaka ity. Ampiana koa anefa ny kôkômbra sy ny tongolo. Etsy ankilany, io lovia io dia mifandray amin'ny idiosyncrasie mampiavaka ny faritra. Tsy misy ifandraisany amin'ny asan'ny mponina ao, fa amin'ny hafanana mahery izay mitranga any Andalusia amin'ny fahavaratra. Mba hiadiana amin'izany dia noforonina ity recipe ity lasopy mangatsiaka sy mamelombelona.
Tahaka ireo sakafo teo aloha, ny gazpacho dia niparitaka nanerana izao tontolo izao. Tsy vitan'ny hoe vita any amin'ny faritra maro hafa ao Espaina toa an'i Castilla La Mancha, Extremadura ary Aragón mihitsy aza ny variana, fa any amin'ny firenena hafa koa. Ohatra, any Meksika ny morelian gazpacho, izay voaomana amin'ny voankazo mahazatra avy amin'ny faritry ny Morelia, tanànan'ny fanjakan'i Michoacán.
Nandritra ny taonjato maro, ny cod no hany trondro nohanina tany amin’ny faritra afovoan’i Espaina. Ny antony dia, tao anatin'ny fotoana tsy nisy vata fampangatsiahana, dia voatahiry tsara amin'ny sira ary azo entina any amin'ny faritra lavitra ny morontsiraka.
Na izany aza, ity recipe ity dia mahazatra amin'ny Sakafo Basque, izay niparitaka nanerana an’i Espaina sy ny antsasaky ny tany. Raha ny marina, anisan'ny sakafo mahazatra any Espaina vita amin'ny trondro, no malaza indrindra sady malaza indrindra amin'ny sakafo mahavelona an'i Euskadi.
Raha ny momba azy dia fantatra tsara ny niaviany. Tamin'ny 1835, mpivarotra Bilbao iray antsoina hoe Simon Gurtubbay dia nanao commande ho an'ny cod avo roapolo amby zato na zato. Tsy latsaky ny iray tapitrisa anefa no nalefan’izy ireo taminy. Tsy afaka namerina azy ireo izy, ka na bankirompitra na nanaratsy ny sainy. Mba hamoahana ny vokatra, dia namorona fomba tsotra sy matsiro izay ho ny cod al pil pil. Nahomby tokoa izany ka lasa nanan-karena i Gurtubay.
Amin'ny maha te hahafanta-javatra ihany koa dia holazainay aminao fa onomatopoeic ny anaran'ity lovia ity. Pil pil dia mamerina ny miboiboika izay maneno rehefa mifamatotra amin'ny gelatine trondro ny menaka oliva. Miaraka amin'ireo akora roa ireo, ny fomba fahandro dia ahitana tongolo gasy, dipoavatra ary sakay.
Toy izany koa, ity fomba fanao laoka mahazatra ity dia nandrahoina tamin'ny a crockpot izay natao naroso ihany koa, indrindra indrindra, miaraka amin'ny saosy miboiboika.
Mety tsy ho malaza any ivelany tahaka ny teo aloha izy io, saingy tsy misy mpizahatany miala an'i Madrid raha tsy manandrana izany ary, tsy isalasalana, dia anisan'ireo sakafo mahazatra any Espaina. Ny singa fototra ao aminy dia voanjobory asiana, izay azo inoana fa efa nampidirin’ny Kartago tany amin’ny Saikinosin’i Iberiana.
Na izany aza, ny fampiasana azy ho an'ny stews dia taty aoriana. Voatonona ho voalohany amin'izy ireo ny Sephardic adafina, izay niaraka tamin'ny akoho miaraka amin'ny henan'ondry. Saingy ny fizotry ny tantaram-piainan'i Madrid, araka ny filazan'ny manam-pahaizana, dia mety ho ny vilany lo avy any La Mancha. Ity lovia ity, izay efa masaka tamin'ny Moyen Âge, dia nahitana legume (amin'ity tranga ity, tsaramaso mena) sy hena samihafa.
Amin'ny lafiny iray, ny lasopy Madrid dia vita amin'ny chickpea, anana voaomana manokana ary fanampin-kena. Anisan'izany ny chorizo ​​​​, ny pudding mainty sy ny henan-kisoa, ny ampahany amin'ny akoho ary ny henan'omby. Na izany aza, tamin'ny fiandohany, ny lasopy Madrid dia sakafo malaza ary noho izany dia manetry tena kokoa.
Tamin'ny taonjato faha-XNUMX no nanomboka niseho teo amin'ny sakafon'ny trano fisakafoanana Madrid ilay lovia. Indrindra indrindra, tamin'izany fotoana izany dia natolotry ny trano fisakafoanana raitra lhardy Avy any an-drenivohitra. Noho izany, ny kilasy ambony dia nanjary nahafantatra an'io sakafo matsiro io, izay mariky ny culinary an'i Madrid ankehitriny.
Ankoatra izany, tsy maintsy milaza aminao izahay fa, mahagaga, ny lasopy Madrid dia iray amin'ireo sakafo izay tapaka ho roa na telo mihitsy aza, raha mihinana misaraka ny hena. Efa tamin'ny taonjato faha-XNUMX, ny ron-kena mahandro dia nanomboka nalaina tao amin'ny antsoina hoe "primer overturn" ary SOPA miaraka amin'izay lanina alohan'ny handrahoana azy.
Ny mofomamy Santiago
Mofomamy an'i Santiago
Tsy azoko ny mamy amin'ity fanolorana sakafo mahazatra avy any Espaina ity izay ataonay ho anao. Afaka miresaka aminao izahay casadiellas Asturian, ny pestiños ny Andalusia sy Extremadura, ny nougat Levantine na ny sobaos Cantabrians. Saingy nisafidy ny hanao izany izahay Mofomamy an'i Santiago, avy amin'ny Galicia.
Na dia efa tamin'ny taonjato faha-XNUMX aza dia misy resaka a mofomamy mpanjaka miaraka amin'ny akora mitovy, ny fomba fanamboarana voalohany nosoratana tamin'ity daty mamy ity tamin'ny taonjato faha-XNUMX. Ary koa, ny firaketana ny Cross an'i Santiago eny ambonin'ny tany dia vao haingana kokoa. Izany no hevitry ny Compostela Casa Mora tamin'ny 1924.
Ny singa fototra amin'ny mofomamy Santiago dia ny amandy. Ary miaraka amin'izy ireo, siramamy, atody, kanelina ary voasarimakirana na hodi-boasary. Miaraka amin'ity fomba fahandro tsotra ity, ny iray amin'ireo zava-mamy matsiro indrindra eran-tany dia natao.
Ho famaranana, dia nanolotra anao ny sasany amin'ireo sakafo mahasolo tena indrindra ny Sakafo mahazatra any Espaina. Saingy, tsy azo ihodivirana, navela tao amin'ny ranomainty ny hafa tahaka ny sombintsombiny amin'ny karazana faritra samihafa ao aminy, ny Salady dipoavatra natsatsika ny Catalonia, ny Castilian sy Aragonese zanak'ondry minono (antsoina hoe ternasco), ny Salmorejo na ny manaova saosy maintso. Mendrika ny fanamarihana manokana Jamon, fa tsy recette ity fa vokatra. Tsy te hanandrana azy ireo ve ianao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Fialantsasatra any Eropa » España » Sakafo mahazatra any Espaina
Tanàna mahafinaritra eto Malaga
Te hahafanta-javatra an'i Roma